नेपालमै जटिल शल्यक्रिया – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नेपालमै जटिल शल्यक्रिया
२०७१ असार १७, मंगलवार ०३:१२ गते
नेपालमा जटिल र दुर्लभ मानिएका शल्यक्रिया सफल भएको धेरै वर्ष भएको छैन । अहिले सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा दिनहुँ दर्जनौँ सामान्य शल्यक्रिया सम्पन्न हुन्छन् । हालैमात्र गोरखाका मनबहादुर सुनारको फर्निचरमा काम गर्ने क्रममा आराले छिनेको हत्केला चिकित्सकहरुले जोड्न सफल भएका छन् । सुनारको छिनेको हत्केला राजधानीस्थित ग्राण्डी अस्पतालमा झन्डै १२ घन्टापछि जोडिएको थियो । शल्यक्रियामा डा. जयनमान श्रेष्ठ, डा. भाष्करराज पाण्डे, डा. ज्योति रायमाझीलगायतको टोली खटिएको थियो । शल्यक्रिया विशेषज्ञ, हाडजोर्नी विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन, बेहोस बनाउने चिकित्सक, प्राविधिकलगायतको टोलीले सुनारको सफल शल्यक्रिया गरेको थियो । यस्तै प्रकृतिको शल्यक्रिया गत फागुनमा चितवन मेडिकल कलेजमा पनि गरिएको थियो । फर्निचरमा काठ काट्ने मेसिन चलाउने क्रममा भरतपुरका मोहन थापाको पूर्ण रुपमा छिनेको हात एमसीएच प्लास्टिक सर्जन (सुपर स्पेसलिस्ट) डा. बुद्धिनाथ अधिकारी नेतृत्वको टोलीले चार घन्टाको लामो शल्यक्रियापछि जोडेको थियो ।
त्रिवि शिÔण अस्पतालमा पहिलो पटक १२ वर्Èअघि एउटा हात शल्यक्रियाबाट जोडिएको थियो । चार वर्Èअघि चु“डिएका दुवै हात पनि शल्यक्रियाबाट जोडिएको थियो । प्रेसमा काम गर्ने हेटौँडाका शमशेर कार्कीको दुवै हातको नाडी २०६७ वैशाख २२ मा काटिएर छुट्टिएको थियो । यस्तै, २००४ मा राजधानीका चर्चित गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको बाया“ हात र विवेक श्रेष्ठ, कनैयालाल अग्रवाल र २००७ मा विकास श्रेष्ठको छिनेको हात जोडिएको थियो । अधिकांशको हात झडपका क्रममा तरबारको प्रयोगबाट काटिएका थिए । विश्वमै दुर्लभ मानिने मस्तिष्कको नेपालमै सफल शल्यक्रिया भएको थियो । देशकै जेठो वीर अस्पतालमा तीन चिनियाँ विशेÈज्ञसहित वीर अस्पतालका चिकित्सकहरुको टोलीले दुई जना मस्तिष्कसम्बन्धी रोग लागेका व्यक्तिको पनि सफल शल्यक्रिया गरेकोे थियो । नेपालमा यस्ता प्रकृतिका दुर्लभ शल्यक्रियाहरु एकपछि अर्को गर्दै सफल भइरहेका छन् ।
चिकित्सा विज्ञानमा दुर्लभ र जटिल मानिने छुट्टिएका अङ्ग पुनः जोडिने शल्यक्रिया गरिएका अत्यन्तै कम उदाहरण छन् । त्रिवि शिÔण अस्पतालमा एक दशकअघि नेपालमा पहिलो पटक प्लास्टिक सर्जन डा. ईश्वर लोहनीको टोलीले यस्तै प्रकृतिको शल्यक्रिया गरेको थियो । डा. लोहनीको नेतृत्वमा दुवै हात जोड्ने एकसहित आधा दर्जनभन्दा बढी शल्यक्रिया सफल भइसकेको छ । यस्ता घटना हुँदा छिनेको अङ्ग कसरी अस्पतालसम्म पु¥याउने भन्ने ज्ञान सर्वसाधारणमा नहुँदा अपाङ्ग बन्नु परेका धेरै घटनाहरु छन् । काटिएको अङ्गलाई सुरक्षित रुपमा प्लास्टिकले हल्कासँग बाँधेर आइसमा राखेर ६ घन्टाभित्र अस्पताल पु¥याउन सके जोड्न सकिने चिकित्सकहरुको अनुभव छ । सूक्ष्म रुपबाट गरिने यस्तो जटिल शल्यक्रिया सफलताका लागि सर्जरीबाहेक अन्य धेरै कुरामा भर पर्ने चिकित्सकहरुको विश्लेषण छ । छिनेको अङ्ग जोड्न उच्च प्रविधि भएका अस्पताल र विज्ञहरुको पहुँचसम्म पुग्न सके कोही पनि अपाङ्ग हुनु नपर्ने भएको छ ।